Boqorka Saylac lagu Caleemo Saarayaa, Ma Boqorkii Ciisaa Mise waa Boqorkii Ismaaciil Cumar Gheelle « SAWNEWS NETWORK
« Daawo Muuqaalka Dhisme Lagu wareejiyay Garoonkii Kubada Cagta ee Xassan Sh.muumin Stadium Ee Magaalada Borama
Your vote is your fate »
Boqorka Saylac lagu Caleemo Saarayaa, Ma Boqorkii Ciisaa Mise waa Boqorkii Ismaaciil Cumar Gheelle
Adduunkan maanta waxa lumay runtii waxana batay beentii, dulmigii iyo danaysigii. Arrintaasi waxay si gaar ah ugu badan tahay dadka Africa iyo dawladahooga. Haddaanu nahay dadka beesha Ciise waxa la nagu yiqqiin daacadnimo iyo run sheeg. Baryahan danbe waxa na hoggaamiyay dad reer Ethiopia ah oo sida Xabashida u caloolo badan. Ninka maanta Ciise u taliyaana waa nin reer Diridhabe ah. Wuxuu lumiyay wixii dadku reeraha Ciise ku yaqaaneen oo dhan iyo dhaqankoodii. Siyaasadda iyo danaysigu waa waax la qallociyo kolba sidii loogu danaysanayo waxanay lumiyaan quruxda dhaqanka aan uga soo joognay awowyaasheen. Dadkii ciise iyagana khasaare maskaxeed baa gaadhay oo waxay u kala qaybsameen kuwa beenta ku haftay oo run moodaya iyo inta badan oo dabannada haysta yaab awgeed. Waxa la is weydiinayaa sua’aasha ah: Boqorkan Saylac lagu caleemo saarayaa ma boqor ciisaa mise waa boqorkii Ismaaciil cumar Gheelle. Dadka ciise intooda badani waxay u arkaan boqorkani inuu yahay boqorkii Ismaaciil cumar Gheelle. Arragtidoodana waxay sabab uga dhigeen qodobadan:
– Boqorka ciise weligii dawladi ma caleemo saarin, wafdiyo dawladha jaarka ugama iman jirin, idaacadaha dawladahana lagama buunbuunin.
– Boqorka waxa caleemo saari jiray odayaal dhaqameed waxana la raaci jiray qaab gaar ah oo dawlad iyo siyaasad ka fog.
– Boqorka dawladi guri weyn uma dhisi jirin, taajna umay saari jirin
– Boqorka waxa la denin jiray dhulka ciise ku badan sida Diridhabe iyo Shiniile. Taas waxa loola jeeday inuu ka war hayayo danaha dadkiisa.
– Boqorka lama dejin jirin dhul ciie degaankiisu ku yaryahay. Dhulka u dhexeeya Saylac ilaa Xariirad dhul dad degen yahayba maaha. Halkii kilometer waa hal qof inta lagu qiyaasi karo. Markaa boqorkani ma dad ilaalinayaa mise waa mid dhul ilaalinaya?
– Boqorka waxa looga baahanyahay dhulkii shiniile oo maanta Oromo foodda ku soo hayso. Dhulkaasina waa dhulkayagii aan boqorka uga baahnayn inuu nala joogo nagula taliyo oo nagula tashado.
– Boqorkani waa mid aan dadkii ka fogaaday oo ku dhowaaday Ismaciil si uu siyaasadiihisa aan soconayn ugu fushado.
– Guri weyn oo meel laga taagaa oo boqor beeneed la dhex fadhiisiyaa malaha qurux. Boqor wuxuu macno iyo qurux ku leeyahay markuu dadkiisa dhex joogo
– Ciise boqornimada heshiis bay ku ahaan jireen marka dhaqankii jiray lagu caleemo saaro. Maanta Ismaacil siyaasad buu geliyay boqornimadii heshiisna kuma nihin boqorkaa isagaa iska leh waana wakiilkiisa ee boqor Ciise.
Waxan la hadlayaa inta danaysa danta ciise iyo dhaqankooda. Lama hadlayo inta hareer ordaysa iyo dhuuni raaca Ismaaciil. Waxan leenahay dhaqankayaga ha laga saaro siyaasadaha iyo beenta. Waxan leenahay Ismaaciil shalay buu yimid berri baanu tegeyaa. Dhaqanka ciise maaha mid shalay yimid beerina tegeya. kama yeelaynayo inuu Ismaaciil dhooqadiisa dhex dhigo.
This entry was posted on February 8, 2010 at 11:22 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.